Isuphu yeTurkey eshiyekileyo kunye neTapile Drop Dumplings - Iiresiphi
Iindidi Zo Zokonakala
Zonke Malunga Iivithamini
Isuphu yeTurkey eshiyekileyo kunye neTapile Drop Dumplings
Ithenda Amadombolo ewawisa zilongezo ngokugqibeleleyo kuyo nayiphi na isuphu okanye iresiphi yesityu senkomo . Iitapile ezicujiweyo ezinokhilimu zixutywe kunye nezongezo ezimbalwa onokuthi ube nazo. Isiphumo sisiduli esityebileyo nesithambileyo phezu kwesuphu yeTurkey eseleyo.
Ngelixa ndiphezulu isuphu yeTurkey, ezi zinokuqhubeka kwakhona isityu senkukhu okanye nkqu isuphu yehamburger .
Ndonwabile kakhulu ukusebenzisana naye Bob Evans ukukuzisela le recipe yesuphu yokufudumala kwesisu!
Sonke siyazi ukuba iitapile ezicujiweyo kukutya okuthuthuzelayo okugqibeleleyo kwaye ngakumbi xa ziba yinxalenye yale sophu ithuthuzelayo. Kule recipe sithathe intsalela yethu i-turkey eyosiweyo kwaye yasiguqula yasisidlo semozulu esigqibeleleyo!
Ekubeni le recipe isebenzisa i-turkey eseleyo, oku kuthetha ukuba ndigqiba ukupheka isidlo se-turkey ukuze ndizame ukugcina i-prep ubuncinane!
Senze amadombolo sisebenzisa Bob Evans Iitapile ezicujiweyo ukugcina le recipe ilula kwaye ikhawuleza. Ezi tapile ezicujiweyo zifana nje nezasekhaya kwaye zinencasa emnandi.
ISuphu eKhawulezayo neLula
Le recipe iqala ngetswele kunye ne-turkey eseleyo. Ndihlala ndisenza Isitokhwe saseTurkey (okanye umhluzi) ukusuka kwisidumbu sam esiseleyo kodwa ungasebenzisa umhluzi othengiweyo wevenkile. Ukuba kunokwenzeka ukuba ube ne-gravy eshiyekileyo (okanye i-drippings) yongeza ukuze unambitha umhluzi ngakumbi. Ndongeza idash ye isinongo senkukhu phantse yonke imbiza yeturkey okanye isuphu yenkukhu .
Ndongeza imifuno ekhenkcezisiweyo nangona kunjalo, ukuba ngaba ushiye iminqathe , iibrussels zihluma okanye iimbotyi eziluhlaza , zinokongezwa. Kuba sele ziphekiwe uya kufuna ukuzongeza kwimizuzu emi-5 yokugqibela ukuze zingafumani mushy.
Indlela yokwenza iDrop Dumplings
Ezi zahlukile kune-dumpling yeetapile yaseJamani. La madombolo athambile kwaye ajongwe ukuba aphekwe kanye ngembiza yesuphu. Amasuntswana estatshi asuka kumadombolo anceda ukujiya umhluzi kancinane ngelixa amadombolo ngokwawo anencasa kumhluzi.
Ndiyakuthanda ukongezwa kweetapile ezicujiweyo kumadombolo am kunye Bob Evans Iitapile ezicujiweyo yenza oku kube yimpepho epheleleyo ukulungiselela. Bagqibelele kule recipe, ukuphelisa isidingo sokwenza ibhetshi epheleleyo amazambane abhuciwe , ukugcina le recipe ilula kwaye kulula.
Dibanisa iitapile zikaBob Evans ezicujiweyo, umgubo, umgubo wokubhaka kunye namaqanda.
Xuba ude ube nentlama engqindilili. Inhlama akufanele ibambelele kakhulu, yongeza umgubo ngakumbi ukuba intlama yakho incangathi kakhulu.
Gcoba ngokugalela amacephe kwisuphu ebilayo, gubungela kwaye ubilise malunga nemizuzu eyi-7-9 okanye de kube amadombolo aphekwe embindini kwaye abambe imilo yawo. Susa kwisuphu kwaye ubeke ecaleni.
Phinda ngamadombolo aseleyo.
Ukukhonza, beka amadombolo ambalwa ngaphantsi kwesitya ngasinye. Thela isuphu ngaphezulu kwaye wonwabe.
Iingcebiso zeDrop Dumplings
Intlama kufuneka ithambile kwaye ingancangathi kakhulu. Kufuneka ibambene xa ikhutshiwe.
Vumela intlama ukuba iphumle imizuzu eyi-10-15 ngelixa isuphu iyabila phambi kokupheka.
Pheka amadombolo kwiibhetshi ezincinci.
Ukuba amadombolo abonakala e-mushy, kuya kufuneka apheke ixesha elide. Ziya kuba manzi ngaphandle kodwa zithambile kwaye ziphekwe ngokupheleleyo ngaphakathi.
Ungapheki kakhulu okanye amadombolo aya kuqhekeka.
5ukusuka6iivoti ReviewIndlela yokupheka
Ixesha lokulungiselelaShumi elinantlanu imizuzu Ixesha Lokupheka25 imizuzu Ixesha elipheleleyo40 imizuzu Iinkonzo6 iinkonzo Umbhali Holly Nilsson Iitapile ezicujiweyo ezinokhilimu zixutywe kunye nezongezo ezimbalwa onokuthi ube nazo. Isiphumo sisiduli esityebileyo nesithambileyo phezu kwesuphu yeTurkey eseleyo.
▢Nye itswele inqunqwe
▢Nye icephe i-oyile ye-olivu
▢8 iikomityi umhluzi we-turkey okanye umhluzi wenkukhu
▢3 iikomityi imifuno exutywe
▢Mbini iikomityi i-turkey ephekiweyo inqunqwe
▢½ icephe isinongo senkukhu
▢Nye ipakethe Bob Evans Igalikhi yeetapile ezicujiweyo
▢1 ½ iikomityi umgubo yonke injongo
▢1 ½ amacephe umgubo wokubhaka
▢Nye icephe iparsley entsha
▢Nye iqanda elikhulu
Pheka i-anyanisi kwioli yeoli phezu kobushushu obuphakathi de ithambe, malunga nemizuzu emi-4.
Yongeza izithako zesuphu eziseleyo kwaye ubambe imizuzu eyi-15.
Okwangoku dibanisa zonke izithako ze-dumpling kwisitya esiphakathi kwaye udibanise kakuhle ngefoloko ukwenza intlama. Intlama kufuneka ithambe ngokufanelekileyo kodwa ingabi namanzi.
Ngelixa isuphu ibilayo yehlisa intlama ngokugalela amacephe phezu kwesuphu. Kwakhona ukubila de badada ukuya phezulu, malunga nemizuzu esi-7.
Susa ngecephe eslotthiweyo kwaye uphinde ngamadombolo aseleyo.
Ukukhonza, beka amadombolo ezantsi kwesitya sesobho kunye nesuphu yeladi ngaphezulu.
Iikhalori:388,Iicarbohydrates:54g,Iprotheyini:18g,Amafutha:12g,Amafutha aGqithisiweyo:5g,ICholesterol:68mg,Isodium:1593mg,Potassium:942mg,Ifayibha:6g,Iswekile:Mbinig,IVithamin A:4735IU,Ivithamin C:3. 4mg,Ikhalsiyam:127mg,Iayini:4mg
IkhosiIkhosi ephambili, isuphu
Umgangatho Ophantsi Ne Vines Umculo Artists Ufeng Shui Kulekhaya Ukungathembeki Ubuxoki Ukuba Likhoboka
Ubambiso Ukuhlawula Amatyala
kutheni ikati yam indibeka emhlubeni
Inja yokukhulelwa kwe-ultrasound iveki ngeveki
ukucoca izitena zodaka nodaka
iimoto zasimahla kwiinkqubo zabafundi beekholeji
ukapteni morgan uxabise iarum apple cider